Inopfuura 2000 mitsara yekugadzira yakagadzwa neBricMaker kusvika parizvino kumba nekune dzimwe nyika, BricMaker inovimbisa mapurojekiti evatengi nehupfumi, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba, kushandisa michina, uye kuchenesa kuratidzira, kubatsira mabhizinesi emakasitoma edu kuwana mabhenefiti akakura uye kuona kukosha kwehupenyu!
NGATITEI UVE NYANZVI YA BRICK MAKER
Kuti uve nyanzvi yekugadzira zvidhinha, iwe unofanirwa kunyatsoongorora zvinotevera 4 zvinhu zvekumisikidza chitsva uye chazvino chidhina chezvidhinha: Raw Materials Kuongorora, Kugadzira kweinjiniya, Kusarudza Zvishandiso, Management Normalizing. Isu BricMaker tinoda kugovana newe yedu yezvidhinha indasitiri yemakore makumi maviri 'ruzivo uye kukupa iwe zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye tekinoroji mhinduro, kuti ikubatsire iwe kuwana hukuru hwakakura hwehupfumi uye nekuziva yako wega hupenyu kukosha!
Inogadziriswa Hammer Crusher
Kaviri Kuunganidza & Robhoti Kuisira
Welcome To BricMaker
Kugadzira zvidhinha, kupa mazano ekutaurirana kwezvidhinha chirimwa, dhizaini yekugadzira & kuvaka uye otomatiki yekugadzirisa mhinduro.
BricMaker inyanzvi yevhu (sintered) michina yekugadzira zvidhinha, R&D, kiln uye auto yezvidhina gadziriso mhinduro. BricMaker inovhara anopfuura mahekita gumi, ine anopfuura 30,000 mativi emamita emamita ekugadzira emusangano, iine huwandu hwekudyara kwemamirioni makumi matatu emadhora ekuAmerica, uye vashandi vangangoita mazana maviri anosanganisira makumi mapfumbamwe ehunyanzvi & mainjiniya. Mumakore gumi apfuura, BricMaker yakaita mari hombe yevhu (sintered) michina yezvidhinha R&D, yakagadzira zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye zvishandiso zvemidziyo, yakapa mhinduro yezvidhinha yezvipenga nezvigadzirwa zvekuyedza kuongorora, kugadzirwa kweinjiniya dhizaini, dhizaini yekugadzira kuvaka, zvigadzirwa zvekumisikidza & kutumira, nyanzvi yehunyanzvi yekudzidzira etc. Kupa hwakasimba hunyanzvi hwerutsigiro kumazhinji emabhizinesi ezvidhina zvese kumba nekune dzimwe nyika.
USD mamirioni makumi matatu +
Vashandi veR & D
timu 90 +
yakapihwa 2000 +
BricMaker inogadzira zvidhinha, inopa zvidhinha kudhizaina kuronga uye otomatiki kugadzira mhinduro.
Raw Zvishandiso Kuongorora
Ndeipi yako yekupedzisira chinangwa uye zano chigadzirwa? Ndeipi yako yekupedzisira chigadzirwa yekumaka giredhi mumusika? Iwe ungade here kugadzira yepakati kana yepamusoro mhando zvidhinha / block mumusika wako? Kuti uve nechokwadi chekuwana chemhando yepamusoro zvigadzirwa zvezvidhinha kana bhuroka, iwe unofanirwa kufungisisa zvakakomba mbichana zvinhu nekuchenesa uye kuchembera, simba regirini zvidhinha / block, yakapera mhando yechigadzirwa uye simba.
Nekuvandudzwa kwemusika, mazuva ano zvigadzirwa zvekutengesa zvine makwikwi anopisa. Iwe unofanirwa kufungisisa zvizere kudyara zvidhinha nehukuru hwepamusoro, wedzera yako chiyero economisation, nekudaro ubate zvako zvakanakira kushambadzira makwikwi uye chengetedza yakanaka budiriro.
Isu Bricmaker takafunga kuti kugadzira mutengo manejimendi ndiyo kiyi yakakosha yechero fekitori yezvidhina. Semuenzaniso, mari yekushandisa mbishi, mvura uye magetsi mashandisiro, mari yechanza, kuchengetedza mutengo wemidziyo, zvimwe uye zvimwe zvikamu zvemuchina, kana iwe ukaita manejimendi akanaka kune iwo mativi ekugadzira uye uchiita iwo awedzere kuomesa, uyezve kushambadzira kwakanaka apedza zvigadzirwa, tinotenda kuti chako chirimwa chichabudirira uye nguva dzose chengetedza kushanda kwakanaka.
Isu Bricmaker tinokupa iwe systematized sevhisi kubva kune zvidhinha chirimwa kutanga kubvunzana, zvidhinha kugadzira zvese zvakasiyana mbishi zvigadzirwa kuongorora uye kuyedza, yakazara chirimwa mainjiniya dhizaini, zvishongedzo kusarudza kurudziro, yekupedzisira chirimwa manejimendi kuraira kuraira, michina hupenyu hurefu mushure -kutengesa sevhisi, spare uye zvishongedzo zvikamu zve zvishandiso zvinopa. Bricmaker supamaketi inokupa iwe-yekumira kutenga sevhisi uye izere yekuchinja kiyi chirongwa mhinduro kumba nekune dzimwe nyika.
Equipment kushandisa michina
Nekuda kwekuderera zvakanyanya kweyemanheru mutengo wekugadzira zvidhinha, otomatiki ndiyo isingadzivisike tsika yekuvandudza zvidhinha. Clay zvidhinha / block simiti otomatiki yaisanganisira zvinotevera: zvakasiyana mbishi zvinhu zvinowirirana, kudiridza ratio; zvinhu zvekudyisa uye kudzora otomatiki; girini zvidhinha / block yekucheka-kurongedza-kutakura-kurongedza system; tunnel kiln, chinofambiswa kiln yepakati yakasanganiswa yekudzora system; apedza ivhu zvidhinha / block kurongedza system.
Iwe haugone kuchinja mushambadzi unopisa makwikwi, izvo zvatingaite kungoedza kuwana yakaderera yekugadzira mutengo. Tinogona kukupa zvemhando yepamusoro michina uye zvidhinha chirimwa chemberi dhizaini, enzanisa nezvimwe zvakafanana kana zvakafanana zvinopihwa, zvigadzirwa zvedu nekugadzira nesimba rekuchengetedza 30 ~ 40%, uye nekukwirira kunyatsoita 130% +.